LG V10 adịghị adaba ma ọ bụrụ batrị Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Batrị, LG, Noticias
Nyaahụ anyị na-ekwu okwu banyere oke oriri nke otu ngwa nke ndị ọrụ na-ejikarị. Ngwa Facebook bụ onye kpatara ọrụ nke ekwentị na batrị na-ebelata nke ukwuu, nke mere na mmadụ ga-eche n'echiche ma ọ dị mkpa itinye ya. E nwere ụfọdụ ihe ngwọta dị ka iji ihe nchọgharị Chrome, nke dị na ụdị mkpanaka ahụ na-arụ ọrụ dị ka amara iji nọgide na-akpọtụrụ ndị enyi anyị ma ọ bụ ezinụlọ anyị site na netwọk mmekọrịta a. Nsogbu ọzọ onye ọrụ nwere bụ ịnweta ọnụ na, n'ihi ụfọdụ njirimara ọrụ aka, anaghị ahụ nguzozi zuru oke maka oriri kwesịrị ekwesị nke batrị ị nwere.
Otu n'ime smartphones ma ọ bụ mbadamba ndị ahụ bụ na nso nso a LG V10 weputara. Ọnụ nke juru ụfọdụ njirimara dị ka ogwe nke abụọ dị na elu nke ihuenyo mbu na nke ahụ, ọ bụghị naanị nwere otu igwefoto n'ihu, mana abụọ. Nnukwu nzọ site n'aka onye na-emepụta Korea na ekwentị 5,7 nke anụ ọhịa nwere Quad HD ihu igwe na-esonyere ya na Snapdragon 808 mgbawa, nke bụ ihe na-enye ndụ maka usoro ndị a niile iji rụọ ọrụ zuru oke na ama a nke bụ ihe ịtụnanya. Nnukwu ihe nkwarụ nke ọ nwere bụ oge ndụ batrị, otu n'ime ihe kachasị njọ n'etiti ekwentị nwere nnukwu ihuenyo.
1 Batrị nke na-adịgide adịgide ọ bụla
2 Na-agafe ule
Batrị nke na-adịgide adịgide ọ bụla
Ekwesighi m ikwu ihe ọ bụla, n'ihi na ọ bụrụ na anyị atụnyere ya nke ndị ọzọ smartphones dị ka Xperia Z3 compact, ọ na-erugharị onwe ya ọtụtụ ihe site na ihe ọ na-enweta na ekwentị a. Site na Ekwentị Arena, e meela ọtụtụ ule iji gosipụta ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-ekwu banyere ekwentị a nke nwere ọtụtụ nkọwa dị na ngwaike ahụ, ma ọ dị ịrịba ama.
Ihe ngosi QuadHD nke 5,7 nke anụ ọhịa na a abụọ panel maka ificationsma Ọkwa na-akpọrọ anyị ozugbo na smartphone nke chọrọ nke ya site na batrị 3.000 mAh. Mkpebi dị elu, nnukwu ihuenyo na nke abụọ na-eduga anyị na ule ndị ahụ nke a chọpụtara na V10 anaghị akpa agwa dị ka atụ anya ya.
Anyị amatalarị na ọtụtụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ha na-ahọrọ inwe ọnụ nke nwere ike iji ụbọchị ahụ karịa karịa, kama ịnwe mgbawa kachasị mma, RAM buru ibu ma ọ bụ ihuenyo nwere mkpebi 4K. Samsung nke Galaxy S6 nke Samsung nwere nsogbu batrị site na iji ike ọzọ maka ogwe ngosi ngosi na mkpebi QuadHD.
Na ule ndị a rụrụ na-etinye ya na batrị nke V10 dị ka ndị kasị njọ n'etiti ndị kasị ibu igwe na ihuenyo. Ebe nrụọrụ weebụ a gafere ederede omenala nke na-egosipụta ụdị ndụ batrị iji tụọ arụmọrụ batrị iji kwekọọ otu ọnọdụ. E debere ọkwa 200 nits na ekwentị dị iche iche a nwalere. Na ule nke edemede ahụ na-agba ọsọ oge niile na ngwụcha ihuenyo mgbe niile ruo mgbe batrị mechara nwụọ.
LG V10 nwetara ole na ole 5 awa na 51 nkeji nke ndụ batrị, dị ala karịa ekwentị ndị ọzọ dị ka Samsung Galaxy Note 5 ma ọ bụ Apple's iPhone 6S Plus. Ndị a nwere 9 awa na 11 nkeji abụọ, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa atọ na ọkara karịa ekwentị ọhụrụ LG.
Otu n'ime data mmasi nke ule ndị a bụ na LG V10 na-eme nyere ezigbo mma na ngwa ngwa Nchaji jiri 65 nkeji mezue ya, ebe Nkọwa 5 were 81 nkeji na Apple ruo 165 nkeji. Dị ka ị nwere ike ikwu na enweghị mmerụ ahụ nke na-anaghị abịa, ọ bụ ezie na nke a anaghị edozi nsogbu nke LG nwere ugbu a na phablet a nke nwetarala oge kachasị njọ nke ndị a nwalere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Ndụ batrị nke LG V10 bụ otu kachasị njọ n'etiti ekwentị ndị a maara dị ka phablets.
Ee ???? Ọ maghị
Zaghachi Jose Chan
5 awa nke ihuenyo ??
Zaghachi Angel Gonzalez
Oge 5 ruo mgbe ekwentị gbanyụrụ mgbe ị na-eji edemede nyocha na ihuenyo na oge niile.
Sergio Guerrero Lopez ihe oyiyi dijo
Echere m na ọ bụ ama nke afọ
Zaghachi Sergio Guerrero Lopez
5 awa nke ihuenyo ?? Nke ahụ bụ oge dị ukwuu, n’ụbọchị nke ọ bụla, ọ dịghị onye nwere ekwentị ha na enyo na elekere 5, belụsọ na gị na ya na-arụkọ ọrụ mgbe niile ma ọ bụ bụrụ umengwụ xD, ekwentị nke na-enye awa 3 adịlarị mma na 4 dị egwu nke ahụ nwere obi ọjọọ dịka m kwuru)
Kedu ihe na-adọrọ mmasị ma chọọ ịmata na oge batrị a chere na ọ pụtara na aha ndetu ọ bụghị ụgwọ ngwa ngwa ọ na-ebute ọtụtụ ọdịiche na ọdụ ndị ọzọ. Gaba gawa !!!
Zaghachi Gonzalo CN
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na batrị na-adịte aka, ha ekwughi uru nke ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa na (ma ọ dịkarịa ala na Mexico) ọ na-abịa na batrị ọzọ iji gbanwee ya.
O doro anya na batrị kachasị njọ. Echere m na LGv10 adịghị mma maka iji ọkachamara. Na Mexico ha nyere gị batrị dị ka onyinye n'ihi LG na-eburu n'uche na n'etiti ụbọchị ị ga-anọ na 15%. Onweghi onye na-eme mkpesa mana mgbe ekwentị na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa ma a manye gị ịkpọ oku karịa nkeji 5 ọ na-ekpo ọkụ ruo n'ókè nke ịbụ ezigbo iwe na-ejide ya na ntị gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka batrị ahụ dịgide ma ghara ịmị ọkụ, mee ihe ndị a: Kwupu ihuenyo nke abụọ, ejikwala Wi-Fi, ejirila ngwa facebook na obere ngwa ngwa twitter, gbanyụọ ngwa ndị na-agba n'azụ na mgbe ahụ ị ga - enwe ekwentị na Ọ ga - erute elekere isii nke ehihie.
Nwere ike ibudata Pokémon Shuffle maka gam akporo n'efu na Spanish na Storelọ Ahịa Play
Tutorial: olee ihichapu gam akporo nkebi na DualBoot Mbadamba iji nweta ohere nchekwa na Windows